Xoogagga Sonic: Xawaaraha Dagaalka ayaa hadda loo heli karaa Android | Androidsis
Eder Ferreno | | Ciyaaraha Android, Tababarada
Doogii ugu caansanaa adduunka ayaa soo noqday. Sidee bay noqon kartaa haddii kale, waxaan tixraaceynaa Sonic, kaas oo la soo noqda oo leh a ciyaar cusub oo loogu talagalay android. Waxay ku saabsan tahay Ciidamada Sonic: Speed ​​Speed, ciyaar in muddo ah loo heli jiray aaladaha iOS. Ugu dambeyntiina, muddo markii la sugayay, ayaa Isticmaalayaasha Android hadda way ku raaxeysan karaan ciyaarta.
El ciyaarta ayaa hadda laga heli karaa Google Play. Sida caadiga ah ciyaaraha Sonic, hadafkeenu waa inaan orno, orod badan. Waa inaan noqo kan ugu dhaqsaha badan kana horreeya kuwa nala tartamaya. Laakiin, waxaynu la kulmi doonnaa caqabado inta aannu jidka ku sii jirno.
Xoogagga Sonic: Xawaaraha Dagaalka wuxuu na weydiisanayaa inaan noqonno kuwa ugu dhaqsaha badan dhammaan heerarka kana bad baadi tartamayaashayada. Laakiin, si la yaab leh, waa inaan ka gudubnaa caqabadaha. Markan kuwa nala tartamaya ayaa tagaya dabinno dhig. Laakiin innaguna waan weerari karnaa oo dabinno dhigan karnaa, si tartamayaasha naga hooseeya ay u gaagaamaan oo aan u guuleysanno.
Sonic si otomaatig ah ayuu ugu gudbi doonaa heerarka, markaa hawsheennu waa si fudud u hagidda dhaqdhaqaaqa. Marka waa inaan boodno ama foorarno. Intaa waxa u dheer ordaya. Sababta oo ah tan Xoogagga Sonic: Xawaaraha Dagaalka aan wax badan qabano heer kasta.
Waxaan sidoo kale ku qasbanaan doonnaa ururi siddooyin si loo hagaajiyo dabeecadda. Intaas waxaa sii dheer, iyadoo kuxiran mowqifkeena tartamada waxaan heli doonaa xoogaa sanduuq ah ama kuwa kale. Laakiin, si loo furo xabbad gaar ah oo aan u soconno inaad sugto wakhti cayiman. Waqtigaan waxaa go'aaminaya laabta lafteeda.
Xoogagga Sonic: Xawaaraha Dagaalka ayaa hadda laga heli karaa Google Play. Soo dejinta cayaartu gabi ahaanba waa bilaash, in kastoo sidii la filayay, aan ku helno wax ku iibsiga arjiga dhexdiisa. Iibsiyadani waa inay hagaajiyaan dabeecadeena. Kadibna waxaan kaaga tageynaa xiriirka soo dejinta ee ciyaarta. Sideed u aragtaa ciyaarta cusub ee Sonic?
Ciidamada Sonic - SEGA Laufspiele
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Xoogagga Sonic: Xawaaraha Dagaalka ayaa hadda loo heli karaa Android